TAFA-PIFIDIANANA : Saraha Rabeharisoa sy Ny Rado Rafalimanana -
AccueilRaharaham-pirenenaTAFA-PIFIDIANANA : Saraha Rabeharisoa sy Ny Rado Rafalimanana
Hamaly ny hetahetam-pon’ny vahoaka
Samy manao izay ho afany avokoa ireo kandidà ho Filoham-pirenena amin’izao fotoana anatin’ny fampielezan-kevitra izao. Anisan’izany ny kandidà avy amin’ny antoko PLD, Saraha Rabeharisoa, laharana faha-9 ao amin’ny bileta tokana.
Araka izany, anisan’ny asiany tsindrim-peo manokana ny fahasahiana mitondra vahaolana maharitra ao anatin’ny ara-dalàna sy ny rariny. Tsy lany olomanga, hoy izy, ny firenena. Tsy vitan’izay fa nasiany teny ihany koa, fa ilaina ny fametrahana fanjakana miaro ny aina sy ny zo fototry ny tsirairay. Ho tompon’andraikitra amin’izany isika rehetra, raha ny nambarany, ary hanangana fanjakana miahy vahoaka sy ny tanindrazana. Voasoritra rahateo amin’ny programan’asany ny fametrahana drafi-pirenena mazava.
Ankoatra izay, nohazavainy tamin’ny vahoaka mpanara-dia azy ihany koa ny mahakasika ny fifidianana tsy misy krizy. Voalohany amin’izany, ny fiarahana manaiky ny vokatra, na ny valim-pifidianana ôfisialy, mba tsy hiteraka krizy ho an’ny firenena sy ny fiainam-bahoaka.
Nambarany ihany koa fa raha maro ny vehivavy amin’ireo sehatra maro samihafa eto amin’ny firenena, izany hoe, raha vehivavy no Filoham-pirenena, dia tsy ho toa izao sy ohatra izao ny vokatra azo fa tena tsara lavitra.
Ny Filoham-pirenena, hoy izy, no miaro sy mitsinjo vahoaka, miantoka ny fahalemana eto amin’ny firenena. Hatreto anefa, raha ny fanambaran’i Saraha Rabeharisoa, mbola tsy voavaly mihitsy ireo hetahetam-pon’ny Malagasy, miandrandra fandriam-pahalemana sy fahamarinana, mba ahafahan’izy ireo mamokatra sy miasa am-pitoniana sy am-pahamendrehana…
Noho izany, vonona ny hanatanteraka ny vinany ny kandidà laharana faha-9, Saraha Rabeharisoa, ary vonona ny hifaninana amin’ireo efa nitondra hatramin’izay.
Voasakana ny fidiran’ny angidimby roa
Mitohy hatrany ny antsonjay. Niharan’ny fisakanana avy amin’ny fanjakana ihany koa, ny fampidirana ireo angidimby an’ny kandidà, Ny Rado Rafalimanana. « Rehefa nisy nanao tery vay manta ny an’ireo kandidà hafa, dia tafiditra ihany ny hélicoptère n’izy ireo… Manome fampitandremana ny tompon’andraikitra izahay, fa tsy fampitoviana lenta ny kandidà ny tranga toa izao. Tsy hoe akory rehefa tsy manana fisainana jiolahim-boto izahay, dia tsy tafiditra ny hélicoptère-nay », araka ny fanazavany.
Tetsy ankilan’izay dia nanohy ny fidianana ifotony tamin’ny fihaonana tamin’ny tanora ity Kandidà laharana faha-11 ity, ka tanàna valo teny Atsimondrano no notsidihiny tamin’izany. « Tafiditra amin’ny fametrahana ny fototra sy ny fijerena ifotony ny fitsidihina toa izao », hoy ihany ity kandidan’ny Fanahy Maha-olona ity. Niezaka rahateo izy tamin’ireny fihaonana ireny nanazava ny foto-kevitry ny Kandidà, dia ny vahatra fanahy maha-olona sy ny fanatanterahana ny vahatr’aina, na ny vatoeka. Anisan’ireo sokajin’olona jeren’ny kandidà Ny Rado Rafalimanana manokana ny tanora ? Efa ela izy no nametraka ny feon’ny tanora 1 tapitrisa. « Mila miantsehatra ireo tanora, ary mametraka ny antsoina hoe fanovana », hoy hatrany izy.
Tao anatin’izany fihaonana izany, dia nitondra fanazavana ireo fanamby 9 ihany koa izy, ary nampahafantatra ny vatoeka 17, izay sehatra hanatanterahana ireo fanamby 9. « Mila mamadika pejy isika. Tsy midika ho fanenjehana ireo teo aloha izany, fa tohizina izay tsara nataony, ary avela amin’izay ireo hisotro ronono », hoy ihany ny famelabelarana nataony. Anisan’ireo fakan-tahaka tsara tarafin’ity kandidà ity ny fandrosoan’i Dubaï, ary faniriany ny hitondra izany eto Madagasikara.
Dia ireny niaraha-nahita ireny ny hetsika nataon’ny MAPAR izay niampanga ny fitondrana sy ny solombavambahoaka mpomba ny fitondrana ho mpanao kolikoly ary tonga nametraka fitoriana teny amin’ny Bianco mihitsy taorian’ny fielezan’ilay horonantsary nalaina an-tsokosoko teny ...Tohiny